Ambovombe Androy: Naiditra am-ponja i Marc Tatandraza | NewsMada
Ambovombe Androy: Naiditra am-ponja i Marc Tatandraza
Dimy andro taorian’ny nisamboran’ny zandary azy, tany Mahajanga, naiditra am-ponja vonjimaika (MD) any Ambovombe, i Marc Tatandraza, taorian’ny nakan’ny mpitsara mpanao famotorana am-bavany azy, omaly.
Naiditra avy hatrany am-ponja ny Ambovombe i Tatandraza Marc, ny alatsinainy hariva tokony ho tamon’ny 5 ora sy sasany. Taorian’ny didy fampisamborana NR 053-C/D tamin’ny 12 marsa 2018 ny anton’izao fampidirana am-ponja izao. Miandry ny fitsarana azy ny lehilahy, voampanga amin’ny raharaha maromaro toy ny fakana an-keriny ankizy miisa 12, ny fanolanana sy ny fandrahonana. Teo ihany koa ny resaka fanakorontanana saim-bahoaka tamin’ny fanaovana sari-maty sy nitsangana tamin’ny maty.
Nambaran’ny zandary fa nisitrika nitsoaka hatrany izy ity taorian’izay kanjo io tratra tany Mahajanga io.
Tany am-pisitrihana tany izy io ny nandefa matetika sarimihetsika amin’ny tambajotra sosialy manao vava, indrindra ny fandranitana mpitandro filaminana. Efa nandrasana fotsiny izy io, izay nambaran’ny zandary fa nikasa hitarika olona hidina an-dalambe tany Mahajanga.
Nilaza ho Remenabila
Anisan’ny nambaran’i Tatandraza ihany koa fa dahalo niova fo izy, ary io lasa mpitoriteny io. Nisy fotoana nilazan’izy ity tamin’ny horonantsary fa izy no Remenabila. Nivadika ho mpanohana olona amin’ny raharaha politika indray izy avy eo. Nilaza ho nanohana ny hetsiky ny depiote 73 teto Antananarivo, ny 26 avrily lasa teo, ary nanambara fa hitondra olona maro sy hanapaka amin’ny sabatra ny mpitandro filaminana.
“Karazan’ny fandranitana nataon’i Tatandraza tamin’ny tambajotra sosialy avokoa izany”, hoy ny mpitandro filaminana, ary sahy nihantsy fa tsy misy mahasambotra azy eo.
Nampahatsiahivin’ny zandary koa ny momba ireo olona nalainy an-keriny. Zazavavy ny ankamaroany, ary nentiny notanana tany Ambovombe tany. Nametraka fitoriana ny ray aman-drenin’ireo, ary efa nisy fotoana izy voasambotra, saingy tafatsoaka. Nisy namany efa any am-ponja niray tsikombakomba taminy. Miandry ny fitsarana azy ny lehilahy.